Amaxabiso akhethekileyo e-ESRI kaMasipala -iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Amanani akhethekileyo e-ESRI oomasipala
Kubonakala ngathi utshintsho lwelayisenisi ye-ESRI alukwenzeka nje kwizinga lezicelo zewebhu, kodwa nakwiindlela zeshishini. I-ESRI kungokunje ibonelela ngamaxabiso awodwa koomasipala abancinci, abanabemi abangaphantsi kwe-100,000 yabemi ukuze basebenzise amandla eeplatifomu zayo ... kwaye kwangaxeshanye banciphise ubuqhetseba :).
Ezi mvume ziyakwandisa phantsi komgca obizwa ngokuba yi-Enterprise (ELA) kwaye ngokucacileyo zifihla ukusetyenziswa okungenamkhawulo kwemveliso eyahlukeneyo ye-ESRI, nangona itholakala kuphela kwi-United States.
Asazi ixabiso "lamaxabiso akhethekileyo", nangona sasiyibonile ngaphambili kumgca weBentley, xa inikezela ilayisensi yokuKhetha koomasipala abancinci, ukuba ngexabiso lonyaka umgca wonke ungasetyenziswa, inkalo eya kuba. umdla kumasipala ofuna ukwenza inkqubo ye-geoengineering iphucuke, ingakumbi kuyilo lwemisebenzi yoluntu (i-Geopack, i-STAAD, Amanzi), i-Architectural Animation (Triforma), kunye nezicelo ze-CAD ngokubanzi (iMicrostation, i-Descartes, i-Geographics)
Nangona amaxabiso e-ESRI exhomile “koomasipala abancinci”, ayilonyathelo libi kwabo basebenzisa eli qonga ngokungekho ngqiqweni kwilizwe apho imithetho yelungelo lokushicilela ingqongqo. Ukufumana malunga namaxabiso kunye nolwazi oluthe kratya, kufuneka ubhekiselele kwi abashicileli karhulumente.
Kunjalo, kufuneka siqonde ukuba iimveliso ESRI zisetyenziswa ngaphezu yimibutho 300,000 ehlabathini lonke, kuquka 200 imizi emikhulu eUnited States, ngaphezulu kwama-ezimbini kwezintathu iinkampani 500 Fortune naphezu amaziko emfundo 7,000.
Ngendlela: Umsebenzisi we-GIS
akunjalo rhoqo, kwenzeka ukuba ilizwe ngalinye abahambisa iindawo bahlala bephethe amanani amancinci.
ufanele ukuba unakho ukubiza ibhetele elingcono ukuba ungabi yinguqulelo yakutshanje
Sawubona umbuzo wam ukuba ngaba ngoku i-9.3 inguhlobo lwe-9.2 lithengiswa, inguqulo ye-XNUMX iyanciphisa intlawulo yayo, okanye ixabiso lini na ixesha.
Ndabonisana nomsasazisi, kwaye wandixelela ukuba abasasayithengisi iArcView 3x, kwaye ukuba umntu uthengise ngaphandle kwenkxaso.
ngoko sinokucinga ukuba indlela yodwa yokuyifumana isitalato.
Ndivumele ukuba ndikhangele nomsasa apha, ubone ukuba bayasasaza
Alejandra Diaz uthi:
Ndingathanda ukwazi ukuba Colombia iza kuphumeza kwishishini kaEla, yaye apho unako ukuthenga mvume ye ArcView 3.1 e Colombia zokusasaza of ESRI uthi ukuba akukho kuphinda kuthengiswa kwinqaku kodwa zithengiswa nangoku mvume.